Madaxda Puntland & Federaalka Somalia oo isku afgartay qodobada kulankii maanta – SBC
Madaxda Puntland & Federaalka Somalia oo isku afgartay qodobada kulankii maanta
Waxaa soo dhamaaday Kulamo mudo saacado ah uga socday madaxtooyada Puntland Madaxweyne yaasha Dowlada dhexe ee federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh iyo kan Maamulka Puntland C/raxmaan Faroole.
Mid ka mid ah Wafdiga la socda Madaxweynaha Soomaaliya kana mid ah lataliye yaashiisa ayaa u sheegay qalabka warbaahinta in kulamada dhexmaray labada dhinac ay ku soo dhamaadeen guul iyo is afgarad.
“Waxyaabaha laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa, Shirka London, arimaha Dhaqan gelinta Federaalka, sidii loogu shaqeyn lahaa heshiisyadii hore ee Puntland iyo Dowlada Dhexe, iyo arimaha Maamul u sameynta gobolada dalka” ayaa ka mid ahaa hadal uu saxaafada Siiyay lataliyaha Madaxweynaha Soomaaliya C.raxmaan Yariisoow.
Waxaa kele oo uu Eng Yariisoow intaasi ku daray in arinta ugu weyn ee la sida weyn la isula falanqeeyay aheyd shirka ka dhici doona bisha soo socota dalka Ingiriiska siiba Magaalada Landon, kaa soo lagu tilmaamay mid muhiimad u ah Soomaalida uusana la mid aheyn kuwii hore looga hadli jiray arimaha Soomaaliya maadaama madaxweynaha Soomaaliya la gudoomin doono Raiisul wasaaraha Ingiriiska.
“Puntland waxaa lagala tashtay mudnaanta koobaad ee ay dowlada geyneyso shirkaas, waxaana laga codsaday wax kasta oo ay ku dareysona diyaar loolayahay” ayuu markale yiri Mr Yariisoow.
Arinta Federaalka, ku dhaqanka Dastuurka iyo wada shaqeynta labada dhinac ayaa sidoo kale siweyn looga hadlay muhiimadna u lahaa shirkan waxaana ugu dambeyntii qodobadaas ay noqdeen kuwo la isku afgartay oo Guul laga wada gaaray.